SBS Burmese | Listen to Podcasts On Demand Free | TuneIn
Dr. Myint Cho reviews on Aung San Suu Kyi's visit
Myanmar State Counsellor, Aung San Suu Kyi has returned home after her visit in Australia.
Settlement Guide: What you need to know about the minimum wage - သြစတြေးလျနိုင်ငံ အခြေချနေထိုင်ခြင်း လမ်းညွန်: အနည်းဆုံး လုပ်အားခလစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သည့်အရာများ
In Australia, the national minimum wage is set by the Fair Work Commission. Employees cannot be paid anything less, even if they agree to it. But despite being strict rules in place, some businesses still take advantage of their employees, especially when they're overseas students and backpackers. .... finds out more. - သောတရှင်များရှင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ရရှိသင့်တဲ့ အနည်းဆုံး အခြေခံ လစာနှုန်းထားကို Fair Work Commission က သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့...
Red bridge 30th anniversary memorial held on Inya Lake bank. - တံတားနီအရေးအခင်း နှစ်(၃၀)ပြည့် အခမ်းအနား အင်းလျားကန်ပေါင်တွင်ပြုလုပ်။
On the 30 anniversary of Red bridge crackdown students leaders urged to take lesson and to strive for unity. - သမိုင်းကို သင်ခန်းစာယူ၍ အားလုံးစုစည်းညီညွတ်ရန် တံတားနီ နှစ်(၃၀)ပြည့်တွင် ကျောင်းသားခေါင်ဆောင်များတိုက်တွန်း။
Looking for truth in the Facebook age? - ဖေ့စ်ဘွတ် ခေတ်ကြီးထဲမှာ အမှန်တရားကိုရှာဖွေ။
Traditional news services now face unprecedented competition in the age of the internet and social media. - အစဉ်လာ သတင်းဌာနတွေက အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ရက် သတင်းတွေကနေ အခုမကြုံစဖူး စိမ်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
Lung-cancer trials lead to hope ofanew path.
Scientists have identified trails left behind by cancer cells which cause an aggressive lung cancer often resistant to chemotherapy and radiotherapy.
What you need to know about the minimum wage - သင်အနည်းဆုံးလစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေသိသင့်ပါလည်း။
In Australia, the national minimum wage is set by the Fair Work Commission and Employees cannot be paid anything less, even if they agree to it. - သြစတြေလျမှာ Fair Work ကော်မရှင်က နိုင်ငံရဲ့ အနည်းဆုံးလစာကို သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ အလုပ်းသမားက သဘောတူရင်တောင် ဒီထက်နည်း ပေးလို့မရပါဘူး။
Myanmar passed amendments to the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law. - ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်အား မြန်မာ့ပါလီမာန်မှ အတည်ပြုပြင်ဆင်။
Now the president must sign the bill within two weeks after receiving it or may send it back to parliament with recommendations. - ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုဘို့ သမတ က ၂ ပတ်တွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပြီး သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များနဲ့ ပါလီမာန်ကို ပြန်ပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Your smartphone can reduces your brainpower - သင့်ရဲ့ Smartphone က သင့်ရဲ့အသိဥာဏ်စွမ်းကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
A silent, powered-off phone can still distract the most dependent users. - အသံတိတ်ထား၊ ဓါတ်အား ပိတ်ထားတဲ့ ဖုန်းက သုံးစွဲတာ စွဲနေသူများကို ဆက်လက်လို့ အာရုံလွှဲမရ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Message received after more than 130 years - ပုလင်းထဲက သတင်းစကားကို နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်မှရရှိ။
The world's oldest known message inabottle has been found atabeach in Western Australia. - ကမ္ဘာ့ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးလို့သိထားတဲ့ ပုလင်းထဲက သတင်းစကားကို အနောက် သြစတြေလျ ကမ်းခြေမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Dr Myint Tun talked about how to handle parents with dementia - ဒီမင်ချာ ဖြစ်နေတဲ့မိဘများကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သင့်လည်း ဆိုတာကို ဒေါက်မြင့်ထွန်းက ရှင်းပြထားပါတယ်။
Dr. Myint Tun talked about the thingsacarer should know to look after the person with dementia. - ဒေါက်မြင့်ထွန်းက ဒီမင်ချာ ဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာ သိထားရမဲ့ အချက်များကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
Call to criminalise hazing after damming report on campuses - တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဇာတ်သွင်းတာကို အစီရင်ခံစာက ပြစ်မှုအဖြစ်လုပ်ဘို့ တောင်းဆို။
There are calls to criminalise the practice of hazing followingadamning new report exposing bizarre initiation rituals at several Australian universities. - သြစတြေလျံ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဇာတ်သွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံစာတခုက ဖော်ထုတ်ပြီး ဒီလုပ်ရပ်တွေကို ပြစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ဘို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်။
Why is it harder for some Australian to seek help for dementia? - ဘာကြောင့် တစ်ချို့ သြစတြေလျံတွေ ဒီမင်ချာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကူညီယူဘို့ ခက်ခဲတာပါလည်း။
There are more than 425,000 people living with dementia right now in Australia. - အခုချိန်မှာ သြစတြေလျတွင် ဒီမင်ချာဖြစ်နေသူ ၄၂၅,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။
People asking for the Peasants’ Day to be change. - တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ပြောင်းပေးဘို့တောင်းဆို။
On the 2nd March the coup led by General Ne Win military regime was renamed as the Peasants Day. - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ စစ်ဏာရှင်အစိုးရက အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂ရက်နေ့ကို တောင်သူ လယ်သမားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Australia: still the lucky country? - သြစတြေလျဟာ ဆက်လက်လို့ ကံကောင်းတဲ့ နိုင်ငံပါလား။
The isolation felt by many migrants and refugees as they try to settle in Australia have found in the survey of some of the newest Australians. - မိုင်းဂရန့် တွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတော်များများ ခံစားရတဲ့ အထီးကျန်မှုက သြစတြေလျံ အသစ်တချို့ကို စမ်းစစ်မှုအရတွေ့ရှိ ရပါတယ်။
We're working harder but we're getting poorer - ကျွန်ုပ်တို့တွေ အလုပ်ပိုကြိုးစားလုပ်ရသော်လည်း ပိုဆင်းရဲလာနေ။
Life is so short and so stuffed with things; it produces long To Do lists. - ဘ၀ကတိုတောင်းပြီး၊ ရှည်လျားတဲ့ လုပ်စရာစရင်း ဖန်တည်းထားတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။
Daw Chaw Po talks about cancer screening workshop. - ဒေါ်ချောပိုက ကင်ဆာ စမ်းစစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းကို ပြောဆိုထားပါတယ်။
Daw Chaw Po from Burmese Women's Alliance Melbourne explained about the cancer screening workshop they are running. - မြန်မာအမျိုးသ္မီးများ မဟာမိတ်အင်အားစုမှ ဒေါ်ချောပိုက သူတို့ပြုလုပ်မဲ့ ကင်ဆာ စမ်းစစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
SBS investigation into gambling addiction - လောင်းကစားတာစွဲလမ်းနေတာကို SBS မှစုံစမ်းထားမှု။
Inaspecial investigation by SBS has found, gambling addiction is rampant in Australia's most disadvantaged and ethnically diverse areas. - SBS ရဲ့ အထူးစုံစမ်းမှုမှာတွေ့ရတာကတော့ လောင်းကစားတာ ကြီးမားစွာ စွဲလမ်းနေတဲ့ နေရာတွေကတော့ သြစတြေလျရဲ့ ချို့ငဲ့ပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူမျိုးစုတွေ ရှိတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
Do you know how to avoid the latest phone scam? - ဖုန်းပေါ်က လိမ်လည်မှုကို ဘယ်လိုရှောင်းရှားလို့ ရနိုင်လည်း ဆိုတာသင်သိပါလား။
Despite warnings, Australians continue to fall victim to international phone scams. - သတိပေးနေတဲ့ကြားကနေ သြစတြေလျံတွေဟာ ဆက်လက်လို့ နိုင်ငံခြားက ဖုန်းပေါ်ကနေ လိမ်လည် ညာစားတာကို ခံနေရသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Opinions on bill to amend Burma’s Peaceful Assembly and Procession Law. - ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး၊ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြင်မှုပေါ် ထင်မြင်ချက်များ။
The new Bill submitted to Amyotha Hluttaw on the Rights of Peaceful Assembly and Peaceful Procession now have to revealed the estimate cost and who is financing or which organisation before obtaining the approval. - ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင် ဥပဒေကြမ်းတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာမှာ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ကုန်ကျခံမယ့်ပုဂ္ဂိုလ် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုပြီး ထပ်မံထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
Stem cells from sac could be breakthrough for stroke victims. - လေဖြတ်နေသူများကို သန္ဓေသား ရေအိပ်က စတန်ဆဲလ်နဲ့ ကုသနိုင်မည်။
Stem cells extracted from an amniotic sac post-birth could provideabreakthrough treatment for stroke patients. - ခလေးမွေးပြီး သန္ဓေသားရဲ့ အမှေးပါးရေအိပ် ကနေထုတ်ယူထားတဲ့ စတန်ဆဲလ်က လေဖြတ်နေသူများကို ကုသနိုင်ဘို့ ထိုးဖေါက်ကျော်လွှားနိုင်ဘို့ ပေးအပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။